﻿﻿ » DHAGEYSO:C/raxmaan C/shakuur oo jawaab kulul ka Bixiyey Go’aanadii ka Soo Baxay Maxkamada Racfaanka?
DHAGEYSO:C/raxmaan C/shakuur oo jawaab kulul ka Bixiyey Go’aanadii ka Soo Baxay Maxkamada Racfaanka?
Jan 3, 2018 - jawaab
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo shir Jaraa’id galabta Warbaahinta ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka soo horjeestay go’aankii ay Maxkamada Racfaanka gobolka banaadir kaga mamnuucday inuu dalka ka dhoofo.
Waxa uu shegay in dhibaatooyin horay loogu geystay ayna nasiib daro tahay in weli lala daba joogo dhibaatooyin kale oo uu xusay iney masuul ka yihiin Madaxda ugu sareysa dalka sida Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in go’aanka Maanta Maxkamada Racfaanka ku burisay Go’aankii Maxkamada Gobolka Banaadir uu yahay mid Siyaasadeysan isla markaana laga soo abaabulay Madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu shegay in Garsoorka dalku uu iska indho tiray dhibaatadii loo geystay ee lagu laayay 5 ka mid ah ilaaladiisa oo ka tirsanaa Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taasoo uu xusay iney tahay cadaalad daro aan la aqbali Karin.
Maxkamada racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta burisay go’aankii horey uga soo baxay maxkamada gobolka oo sheegay in dembi lagu waayey C/raxmaan C/shakuur, waxayna Maxkamadu xayiraad dhinaca safarada ah ku soo rogtay siyaasigan inta lagu jiro dacwadiisa.